प्रदेश नम्बर-४ को मुख्य मन्त्रीमा काँग्रेस नेता परियार कति सुरक्षित ?
HOME » प्रदेश नम्बर-४ को मुख्य मन्त्रीमा काँग्रेस नेता परियार कति सुरक्षित ?
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार प्रदेश नम्बर-४ को मुख्य मन्त्री हुने गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्यका लागि कास्की क्षेत्र नम्बर १ क बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका परियारले वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी नेता दीपक कोइरालासँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा गर्दै छन्। यद्यपी तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ को क मा प्रदिप पौडेल र ख मा ध्रुव वाग्ले पनि प्रदेश नम्बर-४ को मुख्यमन्त्री हुने गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यी तीन दाबेदार मध्ये प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा प्रदेश नम्बर ४ को मुख्य मन्त्रीको बलियो उम्मेद्वारका रुपमा परियारलाई नै लिइएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग निकट सम्बन्ध रहेका कारण पनि परियारलाई मूख्य दाबेदार मानिएको हो।
सरल र नरम स्वभावका परियार सबैको सुख दुखका सहयात्री बन्दै आएका छन्। उनको स्वभाव र कामले धेरैको मन जितेको छ। परियारसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका माओवादीका नेता कोइराला चितवनका स्थानीयवासी हुन्। वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभामा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खगराज अधिकारीले उम्मेद्वारी दिएपछि माओवादीको भागमा परेको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा माओवादीले कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएको हो।
पाहुँना उम्मेद्वार भएका कारण पनि कोइराललाई त्यहाँका स्थानीयले त्यती चिनेका छैनन्। तर परियार त्यहाँकै स्थानीय तथा मतदातासँग राम्रोसँग भिजेका कारण परियारको जित्ने सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ। परियार त्यति कमजोर उम्मेद्वार हैनन्। अनुभवका आधारमा पनि उनी कोइराला भन्दा परिपक्क र स्थानीयका समस्यालाई नजिकबाट नियालेका उम्मेद्वार मानिन्छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद् समेत बनेका परियार दलितहरुको प्रतिनिधित्व तथा स्थानीय समस्याको समाधानका लागि प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उम्मेद्वार हुन्। त्यस कारण आफुलाई समय दिन सक्ने उम्मेद्वार रोज्ने की पाहुँना उम्मेद्वार रोज्ने भन्ने निर्णय कास्कीका स्थानीको हातमा छ।
कस्तो छ चुनावी आँकलन ?
प्रतिनिधिसभा तर्फ ३ र प्रदेशसभा तर्फ ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्की नेपाली काँग्रेस र एमालेको गढ क्षेत्र मानिन्छ। यस अघि ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्कीमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कास्की १ र २ बाट नेपाली काँग्रेस र ३, ४ बाट नेकपा एमालेले जित दर्ता गराएका थिए। यस कारण प्रदेशसभा सदस्यका लागि कास्की क्षेत्र नम्बर १ क बाट उम्मेद्वारी दिएका परिवारको स्थान काँग्रेसको गढ क्षेत्र मानिन्छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कास्कीबाट कुनै सिट नजितेको माओवादीले यस पटक एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका कारण केही मत बढी ल्याएपछि परिवारलाई हराउन मुस्किल पर्नसक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मेयर र उपमेयर दुबै पदमा एमाले विजयी भएका कारण काँग्रेसले चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने धेरैको विश्लेषण छ। तर क्षेत्र नम्बर १ को क क्षेत्र भने नेपाली कांग्रेसको बाहुल्यता भएको क्षेत्र मानिन्छ।
झन् माओवादीले जिल्ला बाहिरका पाहुना उम्मेदवार उठाएकाले पनि परियारलाई मतदाता रिझाउन त्यति गाह्रो देखिँदैनन्। उनले मतदाताका सुख दुखमा साथ दिदै आएका कारण आत्मियताका दृष्टीले परियारको पक्षमा भोट खस्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।